भित्रबाट न्यानो पर्खालहरु? भौतिक चयन
इँटा, ठोस ब्लक, पूर्वनिर्मित प्यानल र धेरै अन्य सामाग्री - घरहरू निर्माण समयमा अब धेरै फरक सामाग्री प्रयोग गरिन्छ। तर, राम्रो गुण एक ईटा वा ठोस ब्लक छैन कुनै कुरा कसरी, सबै एउटै घरमा छैन भन्दा thermally पृथक छ। त्यसैले, घरहरू निर्माण मा (र यस छैन केवल घरेलु लागू हुन्छ, तर पनि बहु-मंजिल्ला अपार्टमेन्ट भवन) त्यहाँ पर्खाल को थर्मल इन्सुलेशन लागि आवश्यक छ। अक्सर निर्माण कम्पनीहरु मात्र भित्र भूल, बाह्य मशीनिंग ख्याल। तर यो मौलिक गलत छ। महत्त्वपूर्ण इन्सुलेशन र कसरी भित्रबाट पर्खाल ढाक्नु गर्न? यी प्रश्नहरूको जवाफ आजको लेखमा पाउनुहुनेछ।
किन यो घर दुवै पक्षलाई प्रशोधन गर्न आवश्यक छ?
यो टिप्पण लायक छ कि मात्र डबल इन्सुलेशन वा निर्माण ज्यादा देखि ज्यादा जो पालो मा, ताप लागत असर तापमान को अचाक्ली, सुरक्षित गरिनेछ। एक घर मा गर्मी मा व्यावहारिक वातानुकूलन, जाडो ताप प्रणाली न्यूनतम लागू गर्न सकिन्छ समावेश गर्न आवश्यक छैन। तसर्थ, यो कार्य मात्र होइन उपयोगिता मा महत्वपूर्ण पैसा बचत हुनेछ, तर पनि आफ्नो घर थप आरामदायक र सहज बनाउन।
को न्यानो पर्खालहरु भित्रबाट?
मिति, त्यहाँ पर्खाल को थर्मल इन्सुलेशन प्रयोग गरिन्छ कि सामाग्री को दुई मुख्य प्रकार हो। यो खनिज ऊन, विस्तार polystyrene हुन सक्छ। तपाईं कसरी ढाक्नु निर्णय गर्नु अघि एक ईटा पर्खाल भित्रबाट, हामी विस्तृत छलफल यी प्रकार प्रत्येक।
यो सामाग्री सोभियत पटक देखि ठूलो माग छ। त्यसपछि यो निजी घरमा प्रभावकारी इन्सुलेशन को प्राथमिक विधि थियो। अब खनिज ऊन मात्र होइन पर्खालहरु मा, सबै क्षेत्रमा बिल्कुल प्रयोग गरिन्छ। यो सामाग्री उनको गुण मा वस्तुतः कुनै कमियां छ। यो ईटा छ कि बिना, धेरै राम्रो तरिकाले अप धारण गर्मी घर, पूर्वनिर्मित प्यानल वा अन्य कुनै पनि। र तपाईं चाहनुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि, घर भित्र न्यानो काठ पर्खालहरु, एक भेद रूपमा, खनिज ऊन छलफल गर्न सकिन्छ। तर ऊन को स्थापना को समयमा यस्तो respirator, रबर पन्जा र लामो-sleeved वस्त्र रूपमा अतिरिक्त सुरक्षा सावधानीहरु, हेरविचार गर्नुपर्छ भनेर नबिर्स। भौतिक स्वास्थ्य को लागि धेरै खतरनाक छ नजिकै विशेष सुविधा बिना सास फेर्न, र आफ्नो खुला हातले हुन छैन उनको छुनुहोस्।
यो सामान्य, यो सामाग्री पनि काँच समान भनिन्छ कि टिप्पण लायक छ। एउटै सामाग्री को सन्दर्भमा अर्थ यी शब्दहरू प्रयोग गरेर। पसलमा खनिज ऊन को सट्टा मात्र बेचिएको यदि यति सजग छैन।
भित्रबाट न्यानो पर्खालहरु? छनौट polystyrene
ग्लास ऊन संग तुलना गर्न त खतरनाक छ, र यो सबै स्थापना गर्न धेरै छिटो छ रूपमा फोम हाल सबैभन्दा लोकप्रिय थर्मल इन्सुलेशन सामाग्री छ। किनभने यसको कम थर्मल चालकता को, यो गर्दा खनिज ऊन पूर्ण मात्र पहिलो समारोह पूरा, पानी र बाफ को ingress minimizes। तसर्थ, इन्सुलेशन बोर्डहरू स्थापना गर्दा तपाईं मात्र थर्मल, तर पनि पनरोक पर्खालहरु प्रदान गर्नुहोस्।
अभ्यास शो रूपमा, "न्यानो पर्खालहरु भित्र" को मुद्दा अझै polystyrene जित्छ। कारण यसको लाभ यो पर्खालहरु को थर्मल इन्सुलेशन लागि सबैभन्दा बहुमुखी र व्यावहारिक सामाग्री छ।
"Neomid" - समीक्षा। "Neomid" विरोधी मोल्ड, आगो, चिस्यान, वा कीराहरू। प्रभावकारी गर्छ "Neomid"?
प्रति 1 घन समाधान कसरी धेरै सिमेन्ट? को संरचना, अनुपात पुस्तिका
दोस्रो तल्ला को ओभरल्यापिङ को काठ बीम: उपकरण गणना, बीम को आकार
Profiled काठ देखि बंगला - दबाव सामाग्री
प्रबलित ठोस बीम: प्रकार र सुविधाहरू
अलंकार: आफ्नो हात (विधि र प्रविधिहरू) बिछाउने
सेन्ट पीटर्सबर्ग को नगरपालिका अधिकारीहरु। आफूलाई पुरस्कार सल्लाह दिन्छन् गर्न प्रशासन टाउको। लुकेका Tendetsiya र भ्रष्टाचार?
उपयोगी गुण र contraindications समीक्षा: ब्लूबेरी को पात
चिकन केक पैनकेक: यो हुन्छ!
को आइपड के हो र किन यो यति लोकप्रिय छ
मोम स्ट्रिप्स "बुद्धि": सकारात्मक समीक्षा
"मेरो मनपर्ने विषय" - सबै उमेरका स्कूल बच्चाहरु को लागि एक निबंध
कार "ओडी A3": मालिकको, विनिर्देशों र वर्णन को समीक्षा
Oblomov को विशेषताहरु। जीवन वा अस्तित्व?
Spaso-Preobrazhensky विहार Ust-Medveditsk इतिहास र ठाँउहरु
प्रभावकारी व्यवस्थापन टोली - "Lukoil" को नेताहरूले
समीक्षा: GearBest। चिनियाँ अनलाइन स्टोर